မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့်လျစ်လျူရှု - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
မုဒိမ်းမှုနှုန်းထားများမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်လိုလားသူ porn ဝါဒဖြန့်လျစ်လျူရှု
RAPE နှုန်းအဆင့်မြှင့်: ကျေးဇူးပြု၍ ဤမကြာသေးမီကပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသောလိင်အကြမ်းဖက်မှုနှုန်းထားများသည်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှုန်းကိုကျဆင်းစေခဲ့သည်ဟူသောအဆိုအားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းကိုကြည့်ပါ။ (pornographyresearch.com) "လိင်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူပုဒ်မ" လို့ realyourbrainonporn Debunking: အဆိုပါ အမှန်တကယ် ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်မှု၊
သငျသညျ porn အသုံးပြုမှုကိုက "(porn sites များနှင့် sexologists အားဖြင့်) ကိုမကြာခဏထပ်တလဲလဲပြောဆိုချက်ကိုကြားရကြပြီ သိသိသာသာမုဒိမ်းမှုနှုန်းကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ? "ဒါဟာမှားယွင်းတဲ့ပါပဲ။
အဆိုအရ FBI ကဖြန့်ချိသစ်ကိုစာရင်းဇယား (အောက်တွင်ကောက်နုတ်ချက်), (လူဦးရေရဲ့ 100,000 နှုန်း) မုဒိမ်းမှုအရေအတွက်ကတဖြည်းဖြည်း 2014-2016 (stats ရရှိနိုင်နေသောများအတွက်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က) မှတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ဗြိတိန်မှာတော့ 138,045 လိင်ပြစ်မှုများရှိကြ၏, up 23% စက်တင်ဘာလ, 12 ရှေ့အပု 2017 လအတွင်း။
လူငယ်များအကြားအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုသည်။ စင်စစ်အားဖြင့်လူငယ်များစွာသည်သူတို့၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကပ်ထားပုံရသည်၊ တကယ့်ဘဝဖြစ်ရပ်များကိုစိတ်မ ၀ င်စားကြသော်လည်း၊ ဒါကြောင့်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများမှာအများအားဖြင့်ရန်လိုတဲ့အပြုအမူများသာဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက meta- လေ့လာမှု "အထွေထွေပြည်သူ့အင်အားလေ့လာရေးအတွက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်တမန်တော်တစ်ဦးတွင် Meta-အားသုံးသပ်ခြင်း"အစီရင်ခံတင်ပြ:
22 ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများမှ7လေ့လာမှုများဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ [Porn] စားသုံးမှုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သူနဲ့ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကခဲ့သည်, ယောက်ျားနှင့်မိန်းမဦးတို့တွင်အများနှင့် Cross-Section နှင့် longitudinal လေ့လာမှုများ၌တည်၏။ နှစ်ဦးစလုံးသိသိသာသာခဲ့ကြသည်ပေမယ့်အသင်းအဖွဲ့များ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ထက်နှုတ်များအတွက်ပိုမိုအားကောင်းခဲ့ကြသည်။ ရလဒ်များ၏ယေဘုယျပုံစံအကြမ်းဖက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပိုမိုဆိုးဝါးအချက်ဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။
အသစ်ရရှိနိုင် FBI ကစာရင်းဇယားပြန်ဖွင့်သည့်အတွက်ပြီးခဲ့သည့်4နှစ်ပေါင်းကိုကြည့် ဒီစားပွဲပေါ်မှာ (အောက်တွင်ပုံကောက်နုတ်ချက်) ။ 100,000 နှုန်းမုဒိမ်းပြုကျင့်မှုများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှုန်းအရေအတွက်စာမျက်နှာကိုဖြတ်ပြီးထက်ဝက်လမ်းအကြောင်းကိုစတင်။ သငျသညျက၎င်း၏ဟောင်းတဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်သုံးပြီးအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ FBI ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သုံးပြီးနှုန်းထားများနှင့်နှုန်းထားများမြင်လိမ့်မည်။ နှုန်းထားများနှစ်ဦးစလုံးအဓိပ္ပာယ်သုံးပြီးမြင့်တက်လျက်ရှိသည်။ ဤတွင်သော့ချက်အချက်အလက်များ၏မျက်နှာပြင်ပုံပါပဲ။ ဂဏန်း၏ထိပ်တန်း 2013 ထံမှဖြစ်ကြပြီးအောက်ခြေ 2016 ကနေဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုအရ FBI က,
ခန့်မှန်းခြေ 95,730 မုဒိမ်းပြုကျင့်မှုများ 2016 အတွက်ဥပဒေစိုးမိုးရေးသတင်းပို့ (အမွေနှင့်အဓိပ္ပါယ်) ရှိခဲ့သည်။ ဒါဟာခန့်မှန်းချက်ကတော့ 4.9 ခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မား 2015 ရာခိုင်နှုန်း 12.4 ခန့်မှန်းချက်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခြင်း, 2012 ရာခိုင်နှုန်း, 3.9 အဆိုပါ 2007 ခန့်မှန်းချက်ထက်ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်။ (ဇယားကိုကြည့်ပါ 1 နှင့် 1A.)
အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်အခြေခံပြီး, ဆက်လက်ခံရဖို့ပုံပေါ် ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေ stats (ဒီပို့စ်တွင်အထက်ပုံ) ။
ဒါဟာအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ရာဇဝတ်မှုအစီရင်ခံအောက်မှာ-တသမတ်တည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိရဖို့ကောင်းစွာအမြဲပါပဲ။ တစ်ဦးအမေရိကန်ဥပဒေပါမောက္ခအားဖြင့်ဤစာတမ်းတွင်အကြံပြုအဖြစ်လှသောချွတ်ဖြစ်နိုင်သည်တောင်မှရဲကတင်ပြထားပါတယ်: မုဒိမ်းစာရင်းအင်းနှငျ့အတူအိပျဖို့ကိုဘယ်လို: အမေရိကားရဲ့ Hidden မုဒိမ်းအကျပ်အတည်း (2014) ။
ဒီလေ့လာမှုကအဓမ္မပြုကျင့်မှု undercounting များ၏အလေ့အကျင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ကရဲဌာနအတွက်ဘယ်လောက်ကျယ်ပြန့်အမှာစကားပြောကြား။ လိမ်လည်လှည်နှင့်မမှန်ကန်ကြောင်း data တွေကိုဖော်ထုတ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အလွန်အမင်းပုံမှန်မဟုတ်သောဒေတာပုံစံများကွဲပြားခြားနားသွား၏တာဝန်ဖြစ်ပါသည်သောကြောင့်, ငါသည်သူတို့၏ data တွေကိုအတွင်းသိသိသာသာကွဲလွဲချက်များရှိသည်သောတရားစီရင်မှုဆုံးဖြတ်ရန်တစ်စာရင်းအင်းဘေးထွက်မသိချင်ယောင်အဆောင်ထောက်လှမ်း technique ကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ အခြားအမြူနီစီပယ်ဖွယ်ရှိလုပ်မုဒိမ်းမှုတိုင်ကြားချက်၏စစ်မှန်တဲ့အရေအတွက်ကသတင်းပို့ပျက်ကွက်လျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဤဝတ္ထုနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်း, ငါသည်တိုင်းပြည်အနှံ့ကရဲဌာနများအားဖြင့်မုဒိမ်းမှုဖြစ်စဉ်များ၏သိသာထင်ရှားသော undercounting ရှာပါ။ အဆိုပါရလဒ်များ 22 ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 210% မှာအနည်းဆုံး 100,000 ပုဂ္ဂိုလ်များ၏လူဦးရေရဲဌာနများတာဝန်ရှိလေ့လာခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ 1995 မှ 2012 ကနေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာ undercounting ညွှန်ပြ၎င်းတို့၏မုဒိမ်းကျင့်ဒေတာအတွက်သိသိသာသာစာရင်းအင်းမူမမှန်ရှိသည်။
အထူးသ, undercounting တရားစီရင်မှု၏နံပါတ်လေ့လာဆယ်ရှစ်နှစ်စဉ်အတွင်း 61 ကျော်% တိုးပွားလာခဲ့သည်။ အလွန်အမင်းဆက်စပ်လူသတ်မှုနှုန်းထားများအနေဖြင့်ဒေတာများ imputing အားဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ undercounting ဖယ်ရှားပစ်ရန်ဒေတာဆုံး, လေ့လာမှုရှေးရိုးစွဲ 796,213 တစ်နိုင်ငံလုံးအမျိုးသမီးသားကောင်များ၏အတင်းအဓမ္မအင်္ဂါဇာတ်မုဒိမ်းမှုတိုင်ကြားချက် 1,145,309 မှခန့်မှန်းထားသည် 1995 မှ 2012 ထံမှတရားဝင်မှတ်တမ်းများကနေပျောက်ကွယ်သွား။ ထို့အပြင်မှန်ကန်သောအချက်အလက်များအရလေ့လာမှုကာလသည် ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သောအချက်အလက်များကိုခြေရာခံချိန် မှစ၍ မုဒိမ်းမှုအမြင့်ဆုံးနှုန်း ၁၅ မှ ၁၈ သို့ပါ ၀ င်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ မုဒိမ်းမှုအကျပ်အတည်း။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့သုတေသန၏ကျယ်ပြန့်သဘောအရဆိုလျှင် porn အသုံးပြုမှုယုံကြည်ချက်, သဘောထားနှင့်အပြုအမူထိခိုက်စေသောပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီလေ့လာမှုများအထဲက Check - 25 ကျော်လေ့လာမှုများအမျိုးသမီးများနှင့်လိင်အရအခွင့်အရေးအမြင်များဆီသို့ "ကို un-သာတူညီမျှသဘောထား" ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည် - ဤ 2016 Meta-analysis သည်ထံမှသို့မဟုတ်ဤအကျဉ်းချုပ်: မီဒီယာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ: ကိုလက်တွေ့သုတေသနပြည်နယ်, 1995-2015။ ကောက်နုတ်ချက်: